ओलीलाई हटाउने कसैको तागत छैन : डा. दिक्षित « Pathibhara Post
ओलीलाई हटाउने कसैको तागत छैन : डा. दिक्षित
२०७७, १६ श्रावण शुक्रबार
निर्मला हत्याकाण्ड आजमात्र समाचार आएको छ नि, त्यसले मलाई त अचम्म लाग्यो । यसरी एस.पी.ले भनेर न्याय पायो, निर्मलालाई न्याय भएन । यो मुद्दा तल्लो अदालतमा छोड्नुहुँदैन् ।
मुद्दा त्यहाँ छोड्नुहुँदैन् । यसलाइ माथि अदालतमा ल्याउनुपर्छ । त्यहाँ लोकल ठाउँ छ । मुद्दालाई लोकल ठाउँमा छोड्नुहुँदैन । आखिरमा सर्वोच्चमा पु¥याउनुपर्छ । छोड्न त मिल्दै मिल्दैन । कुनै पनि हालतमा ८ जना निर्दोष हुनै सक्दैनन् । यत्रो जघन्य हत्या भएको छ । यसरी क्लिन सफेद दिनु, यति पनि शंका नराखिदिनु यो अचम्म छ ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापा क्षेत्रीको प्रतिक्रिया आएको छ । अपराधमा संलग्नलाई खोजी गर्न सहज बनाएको छ ।